Kubeflow: Kubernetes အတွက်စက်သင်ခန်းစာ Linux မှ
Kubeflow: Kubernetes အတွက်စက်သင်ကြားရေးကိရိယာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်ကိုယနေ့၏လယ်ပြင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ် အလိုအလျောက်သင်ယူခြင်း (စက်သင်ယူ / ML)။ အထူးသဖြင့်ခေါ်ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် application ကိုအကြောင်း "Kubeflow"အလှည့်၌, အလုပ်ဖြစ်တယ် Kubernetes။ မည်သူကသင်သိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်နှင့်အညီ application မ်ားအားဖြန့်ကျက်ခြင်း၊
"Kubeflow" အောက်မှာလက်ရှိရရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းရှိနေသော်လည်း တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း 1.2၎င်း၏တရားဝင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် GitHub ၏တရားဝင်ဘလော့တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့၎င်းကိုမှတ်ချက်ပေးပြီးဖြစ်သည် နောက် version ၁.၃။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီလျှောက်လွှာကိုလေ့လာကြမယ်။
"Microsoft's Cognitive Toolkit (ယခင်က CNTK ဟုခေါ်သည်) သည်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် (Machine Learning) de «Código Abierto» ကြီးမားသောအလားအလာနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်အခမဲ့၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးဖြင့်သင့်ကိုလူ့ ဦး နှောက်နှင့်နီးစပ်သောအဆင့်တွင်သင်ယူနိုင်သည့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု algorithms များဖန်တီးနိုင်သည်။" Cognitive Toolkit: Open Source Deep Learning SW
.NET နှင့် ML.NET: Microsoft Open Source ပလက်ဖောင်းများ
1 Kubeflow: ပွင့်လင်းစက်သင်ယူခြင်းစီမံကိန်း
1.1 Kubeflow ဆိုတာဘာလဲ
1.3 Kubernetes ဆိုတာဘာလဲ
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီပွင့်လင်းတဲ့စီမံကိန်းကိုအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားတယ် - \_ t
"၎င်းသည် Kubernetes တွင်စက်သင်ယူမှု (ML) လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်အရွယ်အစားချဲ့ထွင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးမျိုးအတွက် ML အတွက်အကောင်းဆုံး open source system များကိုဖြန့်ကျက်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတော့ Kubernetes ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Kubeflow ကို run နိုင်ပါတယ်။"
သင်၏ site ပေါ်တွင်နေစဉ် GitHubအောက်ပါအကျဉ်းကိုထည့်ပါ -
"Kubeflow သည်ပိုက်လိုင်းများ၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်ခြင်းတို့ဖြစ်သောစက်သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Cloud တွင်ဇာတိပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။"
ဒီကနေ, ကအလွယ်တကူကြောင်း၏အဓိကရည်မှန်းချက်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ် "Kubeflow" es:
"ကွဲပြားခြားနားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အလွယ်တကူပြန်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောဖြန့်ကျက်ခြင်းများ၊ မိုက်ခရို ၀ န်ဆောင်မှုများဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့မှာအားနည်းချက်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။"
၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများများထဲတွင် "Kubeflow" ကျနော်တို့ကအောက်ပါဖော်ပြနိုင်သည်
အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ဂျူပီတာမှတ်စုစာအုပ်များကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်စီမံခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သည်။ ဒေတာသိပ္ပံ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အတူတူပင်နှင့်အခြားကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုဖြန့်ကျက်ခြင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုစမ်းသပ်ရန်လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပြီးလိုအပ်ပါက Cloud တွင်သူတို့ကိုထည့်သွင်းပါ။
စိတ်ကြိုက် TensorFlow လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်အော်ပရေတာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဘယ် ML မော်ဒယ်လေ့ကျင့်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်, Kubeflow အလုပ်အော်ပရေတာသည်ဖြန့်ဝေထားသော TensorFlow လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ CPU သို့မဟုတ် GPU များအသုံးပြုရန်လေ့ကျင့်ရေး controller ကို configure လုပ်ရန်စွမ်းအားကိုခွင့်ပြုခြင်း၊ ထို့ကြောင့်အမျိုးမျိုးသော cluster အရွယ်အစားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
လေ့ကျင့်ထားသော TensorFlow မော်ဒယ်များကို Kubernetes သို့တင်ပို့ရန်အတွက် TensorFlow Serving container ကိုထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင် Kubeflow သည် ML / DL မော်ဒယ်များကိုစကေးချဲ့ထွင်ရာတွင် GPU အသုံးချမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် Kubernetes တွင်စက်သင်ယူခြင်းပုံစံများကိုထည့်သွင်းရန်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Seldon Core နှင့် NVIDIA Triton Inference Server ကိုလည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။
Kubeflow ပိုက်လိုင်းနည်းပညာပါဝင်သည်။ အဆုံးမှအဆုံးသို့ ML လုပ်ငန်းအသွားအလာများဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်းအတွက်ပြည့်စုံသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်ဆန်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်၊ ပြေးအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ပြေးခြင်းတစ်ခုစီ၏အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Multi- မူဘောင်ဖောင်ဒေးရှင်းပေးထားပါတယ်။ TensorFlow နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင်မကြာမီ PyTorch၊ Apache MXNet, MPI, XGBoost, Chainer နှင့်အခြားအရာများအတွက်မကြာမီတွင်အထောက်အပံ့များရရှိလိမ့်မည်။
ပိုမိုသိရှိရန်အချက်အလက်များ "Kubeflow" သင်၏အပေါ်တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပါသည် တရားဝင်ဘလော့ဂ်.
ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက, "Kubeflow" အလုပ်လုပ်သည် "ကူဘာနက်စ်"သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်အရသတ်မှတ်ရကျိုးနပ်ပါသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အဆုံးစွန်သောအောက်ပါဖြစ်ပါသည်
"Kubernetes (K8s) သည်ကွန်တိန်နာအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ ချုံ့ချဲ့ခြင်းနှင့်စီမံခြင်းတို့ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်အတွက် open source platform တစ်ခုဖြစ်သည်။"
ထိုအမှု၌, အပေါ်နက်ရှိုင်းရန်အလိုရှိ၏ "ကူဘာနက်စ်" အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်နှင့်နောက်ဆုံးဆက်စပ်စာပေများကိုသင်လေ့လာနိုင်သည်။
Kubernetes 1.19 သည်တစ်နှစ်ထောက်ပံ့မှု၊ TLS 1.3, အဆင့်မြှင့်မှုများနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Kubeflow»နက်ရှိုင်းသောလေ့လာသင်ယူမှုနယ်ပယ်တွင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးခေတ်မီသော open source စီမံကိန်းသည် open source platform ၏ရောက်ရှိမှုကိုတိုးမြှင့်စေသည် «ကူဘာနက်နက်»; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Kubeflow: Kubernetes အတွက်စက်သင်ကြားရေးကိရိယာ
VAC တွင် Anaconda ထည့်သွင်းပုံ